Artel ဗီဒီယိုစနစ်များသည် Brad Buchholz အားဘဏ္ofာရေးဒုဥက္ကPresident္ဌအဖြစ်ကြိုဆိုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Artel ဗီဒီယိုစနစ်များဘဏ္ဍာရေးဒုတိယသမ္မတအဖြစ် Brad Buchholz ကြိုဆို
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များဘဏ္ဍာရေးဒုတိယသမ္မတအဖြစ် Brad Buchholz ကြိုဆို
Artel တိုးချဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့, အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုများအတွက်နေရာချထားကုမ္ပဏီ
WESTFORD, Mass - ။ အောက်တိုဘာ 29, 2014 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ, ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးမီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့ဘဏ္ဍာရေးဒုသမ္မတအဖြစ် Brad Buchholz ၏ရက်ချိန်းကြေညာခဲ့သည်။ Buchholz ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အခြားနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတှေ့အကွုံထက်ပို 30 နှစ်ပေါင်းအတူအသိပညာနှင့် Artel တစ်ခုကျယ်ပြန့်ဘဏ္ဍာရေး skillset တစ်စည်းစိမ်ကိုဆောင်တတ်၏။
Artel မှာမိမိအခန်းကဏ္ဍသစ်အတွက်, Buchholz မဟာဗျူဟာမြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်များကာလအတွင်းဘဏ္ဍာရေးခေါင်းဆောင်မှုပေးအပြင်, ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်အစီရင်ခံညှိနှိုင်းရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
"ကျနော်တို့က Artel ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ Brad ကဲ့သို့ဝါရင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထည့်သွင်းဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်ပေါ်နေသောထုတ်လွှင့်စျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကြီးထွားခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဆက်လက်အဖြစ်မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၌သူ၏ကျယ်ပြန့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့ Brad ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကို, Artel ကူညီဆီသို့အကျိုးရှိသောဖြစ်လိမ့်မယ် "ဟုရစ်ချတ် Dellacanonica မှာသမ္မတကပြောပါတယ် Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ။ "ကျနော်တို့ကလည်း Brad ဒီနေ့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းခြင်းတွင်ဘွားတတ်ပါလိမ့်မယ်သောလတ်ဆတ်တဲ့ရှုထောင့်နှင့်အသည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ "
Artel ဝင်ရောက်မတိုင်မီက Buchholz တိုးတက်မှု, Inc မှာ controller ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့် Polychromix, Inc (Thermo Fisher ကသိပ္ပံ) မှာဘဏ္ဍာရေးဒါရိုက်တာအဖြစ်။ သူ Pingtel (Nortel), NBX (25Com), အဆင့်မြင့် Techcom (ကမ္ဘာ့ဖလား Access ကို, Inc), နှင့် Memotec Datacom (Teleglobe ကနေဒါ, Inc) အပါအဝင်ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများမှာအကြီးတန်းဘဏ္ဍာရေးစွမ်းရည်အမှုဆောင်အတှေ့အကွုံ3နှစ်ပေါင်းထက်ပိုရှိပါတယ်။
"Artel ချိတ်တွဲကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးအောင်မြင်မှုရဲ့အရေးပါသောပံ့ပိုးဖြစ်မယ့်အကြီးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်" ဟု Buchholz ကဆိုသည်။ "ငါသည် Artel ရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တစ်ခုတက်ကြွအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်တိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်သောဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်များကိုတည်ဆောက်ခြင်းမျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
Buchholz အနောက်တိုင်းနယူးအင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်ကနေဘဏ္ဍာရေးအတွက် Babson College မှဘဏ္ဍာရေးအတွက် Business Administration တစ် Master နှင့် Business Administration, cum ခြီးမှမျးအတွက်သိပ္ပံဘွဲ့ရှိပါတယ်။
Artel နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.artel.com.
အကြောင်းအရာ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ (www.artel.com)
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ IP ကိုတိုက်ရိုက်ဖိုင်ဘာအဘို့အထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးမီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်တယ်, optical network များနိုင်ခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးကရှေ့ဆောင်, Artel ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်ပါကဗီဒီယို-over-ဖိုင်ဘာကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင် Artel DigiLink မီဒီယာပလက်ဖောင်းအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကို configure နှင့်ကူညီပံ့ပိုးရန်အလွယ်ကူဆုံးပေးပေါ်တွင်အခြေခံဖြေရှင်းချက်ပေးထားခဲ့သည်။ DigiLink မစ်ရှင်အရေးပါဗီဒီယိုနှင့်ဒေတာအတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လွှင့်, ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့် CATV အော်ပရေတာများကနေ့စဉ်အပေါ်သို့မှီခိုနေသည်များထားရှိထောင်ပေါင်းများစွာ၏နဲ့အတူကမ္ဘာ့အများဆုံးကြည့်ရှုအားကစား, သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ရပ်များကိုထောကျပံ့ဖို့ feeds ။ မကြာသေးမီကကုမ္ပဏီ JPEG, 2000 (J2K) အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ၏ Standardization နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အလုပျအတှကျရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ (NATAS) ၏အမျိုးသားအကယ်ဒမီကနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာသူဟာ Emmy (R) ဆုချီးမြှင့်နှင့်အတူဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.202comms.com/Artel/Artel-BBuchholz.jpg
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ အသံလွှင်း Buchholz 2014-10-30
ယခင်: SIM ကဒ် Group မှတည်ထောင်သူရော့ Sim DGC ရဲ့ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘဝကအသင်းဝင် Award ဆုနှင့်အတူတင်ပြ
နောက်တစ်ခု: စျေးသက်သာ high-end တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် broadcast Pix ကြေညာချက်များအားကစား Bundle ကို